Abaphili Bamaxholongwane Bachaza isizathu sokuba I-Cancer Breast
I-Perspective Energy Energy Perspective kwiCatalcer Breast
Ukwazisa Ngomhlaza Webele
Ukufumana i-check-ups rhoqo kwaye ulandelelwe kwiimvavanyo ezinconywayo ezifana ne-mammography kunye ne-MRIs zibaluleke kakhulu ekukhuseleni umdlavuza webele. Xa uthatha ingcamango epheleleyo yempilo yakho kuyona inenzuzo yokusebenzisa ubuninzi bobuchwephesha obunobutsha obufumaneka kuwe ekukhuseleni nasekugcineni impilo ephilileyo.
Okokuqala kwaye kubaluleke kakhulu, kunenzuzo ukunyamekela ukungalingani komzimba.
Okwesibini, ukuqaphela ukuguqulwa kwamandla angcolileyo okwenzeka kwi-aura kunye nommandla wamandla ommandla ojikeleze imizimba yethu yomzimba ingasilumkisa iingxaki ngaphambi kokuba zifikelele ekukhuseleni okanye ukungalingani.
Abagqirha bamagqirha enamandla bafundisa ukuba ukungalingani kwethu kwimizimba kuqala kwizinga elinamandla. Ukungalingani kwamandla okufunyenwe kwi-aura kunye nensima yamandla yomntu kunokubonisa ukungalingani okunokuthi kuqiniswe emzimbeni womzimba (inyama, isisipha, izitho, amathambo, okanye igazi). Ukuphatha ukungalingani okubuqilileyo kumanqanaba okuqala okungafaniyo phambi kokuba kubonakaliswe ukubonakaliswa komzimba kuthatha indlela esebenzayo.
Nangona kunjalo, uninzi lwethu alufundiswanga njani ukujonga iimpawu zokungalingani kwamandla. Siyaqhubeka sihamba rhoqo ngosuku senza okusemandleni ethu. Sifanele siqhelise ukunikela ingqalelo kwiimpawu zamandla ezintle. Kwaye ngokusoloko kungabikho sibonakalisa ukungabi nciphisa okanye ukubandakanyeka ekunyamekeleni abantu abathandekayo abanokuxhatshazwayo ukuba sinokuthatha inxaxheba kumngeni wokuphelisa ukungaphumeleli.
Uthintelo lweCanscer Prevention
Amanyathelo okukhusela okuqala ukukhusela izifo ezifana nomhlaza wesifuba ekubonakalisweni kuya kuthatyathwa ngokuqala ukuqaphela indlela esiziva ngayo kwaye siqale senze utshintsho oluhle kwimpilo yethu yemihla ngemihla. Iindidi ezinomdla zabantu abaqaphela ukungalingani banokufuna unyango kuphela ukuba bafumane ukuba ukuhlolwa kwezonyango akunakunzima ukuqonda ukungalingani kwamandla.
Ukuba oko kwenzeka, musa ukulungela ukukhupha izinto ezixhalabisayo ngaphambi kwexesha. Umzimba wakho uthetha nawe.
Umhlaza wesifuba ungomnye wezinto ezibonakalayo ezichaphazelekayo kunye nentliziyo ye-chakra . Iimvavanyo ezisemgangathweni zingabonisa ukuba akukho ngxaki xa umzimba wakho ukuxelela into eyahlukileyo. Ukuba ngaba kunjalo ungacinga ukuba ufuna ugqirha wamagqirha anamandla aqeqeshelwa ekuqapheliseni iingxaki kummandla wakho wamandla omandla ukuqala inkqubo yokuphulukisa nayiphi na imiba yemvakalelo engavimbela intliziyo yakho. Iiseshoni zokuphulukiswa kwamandla ezijolise ekulinganiseni i-chakras nazo zingancedisa unyango lwenu xa isifo esifana nesifo somhlaza sesisu sele sibonakaliswe ngokomzimba.
Mamela Umzimba Wakho Xa uthetha
Ukunyamekela iimfuno zakho zemoya kunye nokomoya kunokukunceda ukukhusela ukugula okanye ubuncinane ukujamelana nokugula xa kuza. Nceda ungayeki ukuphulaphula umzimba wakho ngenxa yokuba uvavanyo olulodwa okanye omnye ugqirha uthi akukho nto iphosakeleyo. Ukuchonga naziphi na iingcinezelo ebomini bakho ezinokubangela ukuba ungakhathazeki kwaye uthathe nawaphi na amanyathelo onokukwazi ukuzikhupha ezi ngxaki. Kufuneka usebenze iiyure ezimbalwa okanye unqume ukuxhoma kunye nabantu abafakela amaqhosha akho.
Ukuxiliswa kweveki nganye okanye ukutshintsha ekudleni okunempilo kungaba yimpendulo umzimba wakho ufuna. Into ebalulekileyo kukuba unxibelelwano oluvulekileyo kunye nemizimba yakho yomzimba kunye nemizwelo. Ukuphila kwakho kokomoya kunokufuna kwakhona ukuphakamisa. Uyazihlonela xa ubeka ingqalelo kuzo zonke izicwangciso zakho: umzimba, ingqondo, imvakalelo kunye nokomoya.
Iintsholongwane Zentliziyo Iintsholongwane KwiCanscer Breast
Isifo somhlaza sesinye sezifo ezichaphazelekayo ezihambelana nentliziyo ye-chakra . UBarbara Brennan uthi kwincwadi yakhe ethi Hands of Light: Isikhokelo sokuqonda iMithombo yamanzi yabantu ukuba i-chakra eqhekekileyo ibonisa umhlaza.
"I-chakra eqhekekileyo ... ibonakale kuyo yonke isigulane somhlaza engakaze ndiyibone ... I-chakra iyakrazulwa, kwaye umhlaza awuyi kubonakala emzimbeni kwiminyaka emibili okanye ngaphezulu kamva."
Imiba ephathelele uthando kunye nokukhulisisa ithintela impilo yemabele ebhinqa.
Kuhlalutyo lwamandla lwesigulane ngomhlaza wesifuba kubasetyhini, inempilo yezokwelapha, uCaroline Myss wabhala:
"Kwabesifazana abathile, umdlavuza ukhula ekuphenduleni ukungakwazi ukukhulisa, okubangela ukuba uzive unetyala kunye nokuzonda. Abanye bafumana ukwesaba kunye neengxaki zobungqina ngenxa yokungamkeli ukuvalwa kwemvelo komjikelo wobazali xa abantwana bephuma ekhaya . "
UMnumzana we-Norman Shealy, onguchwepheshe kwiinkqubo zentlungu, uchaza kwiSahluko 6 seNdalo yeMpilo: Indlela eyaziwayo yokufa: Isifo senhliziyo, isifo soqhwa kunye nomhlaza :
"Amanqanaba aphantsi e-fiber kunye namazinga aphezulu ashukela kunye namafutha anxulumene nomhlaza ophezulu we-colon kunye nesifuba, isifo sikashukela, amatye enyanga, i-appendicitis, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, i-varicose veins, i-hemorrhoids, i-diverticulosis kunye ne-adrenaline production".
UMkristu Northrup, MD, umbonisi womzimba wengqondo kunye nomqashi we- Women to Health Women's Care Centre uthi:
"Amandla amaninzi asebenzayo xa idilesi ididekile malunga nendlela yokusebenzisa ngayo uthando (isine ye-chakra) kunye namandla akhe okudala (i-chakra yesibili) ngamandla.Impikiswano enkulu phakathi kwabesetyhini kukuba ininzi yethu isakholwa ukuba ukuze kuthandwa, ukufumana uthando, kunye nokuqinisekisa ukuba umntu uyakusidinga, kufuneka sizinakekele iimfuno zangaphandle zomzimba.
Umsindisi womhlaza, umbhali, kunye nomnye wabasunguli bezenzo zokunceda, uLouise L. Hay uyaziwa ngokuqinisekiswa kwakhe kokuphilisa. Hay kwiibele:
"Amabele abhekisela kumgaqo wokuba umama. Xa kukho iingxaki kwiibele, ngokuqhelekileyo kuthetha ukuba 'singaphezu komama' nokuba ngumntu, indawo, okanye into, okanye amava ....
Ukuba umdla umbandakanyekile, kukho kwakhona ukucaphuka. "
I-Anatomy yoMoya: IziGaba ezisixhenxe zeMandla kunye nokuPhulukisa. UCaroline Myss, Ph.D,
Amalungu amabhinqa, Ubulumko Bowesifazane. nguChristiane Northrup, MD
Amandla okuKhanya: Isikhokelo sokuPhulukisa ngokusebenzisa iNdawo yamandla abantu. Barbara Brennan
Ukudalwa kwezeMpilo: Iimvakalelo zengqondo, ezengqondo kunye nezoKomoya ezikhuthaza impilo kunye nokuphilisa. UCaroline Myss, Ph.D., uC. Norman Shealy, MD
Unokuphilisa Ubomi Bakho. ULouise L. Hays
Copyright © Phylameana lila Désy
Nguwe oMbala oyikhethayo
Indlela yokusebenzisa iBhodi ye-Ouija
Unonophelo lweNdalo lweeVilic Veins
Imfazwe yaseValverde - iMfazwe yombutho
Iingcamango zokuFunda ezi-5 eziphezulu zeGGAT
Iingcaphuno Zokuba Ngedwa - Kodwa Azingabi Nesizungu
I-Concept yeGemeinschaft neGesellschaft
AmaKristu Ahlangabezana Njani Neengcinezelo?
I-Roller - Roll; ukuqhuba
Iindaba zeNtsundu zeNdumiso eziMdumisa kunye noNqulo
Umthetho weeNqila zeNqila No. 41 ka-1950
Indlela yokugcina i-Snowboard yakho ngexesha le-Offseason
Inkcazo ye 'Latin Music'
Ukufunda isiJapane: ixesha lokusebenzisa i-On-Reading and Kun-Reading for Kanji
Inkqubo yokuNakekelwa kweMpilo e-US
Yintoni Umbala weSizwe we-Italy?
Izinto ezisibhozo ootitshala abanokukwenza ukuze bancede abafundi baphumelele